Africa Free Trade Agreement: Ihe ise ị kwesiri ịmata maka atụmatụ a - BBC News Ìgbò
Africa Free Trade Agreement: Ihe ise ị kwesiri ịmata maka atụmatụ a
Media captionBongo Adi :Ihe 'Africa Free Trade Agreement' pụtara
N'ụbọchị Wenezde, oge ọ na- anabata onyeisiala mba Saụt Afrịka bụ Cyril Ramaphosa bịara njem nleta, onyeisiala Naijiria bụ Muhammadu Buhari kwere nkwa na ya ga-ebinye anya n'akwụkwọ nkwekọrịta ka obodo 44 dị n'Afrịka na-azụ ma na ere ahịa na enweghi mgbochi ọbụla nke a kpọrọ 'African Continental Free Trade Agreement(AfCFTA)' na bekee.
Cheta n'abali 21 ọnwa Maach afọ a, onyeisiala Buahari kagburu ọgbakọ mba dị na Afrịka nke a na-akpọ, 'African Union'( AU) ebe ọ kara ibinye aka na nkwekọrịta a ga-eji bido"African Continental Free Trade Area."
Uru ise di na mgbanwe ego China'
Ihe Buhari ji kagbuo njem Rwanda
Ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na Naijiria dịka onye bụbu onyeisiala, Olusegun Obasanjo, ndị na-alụ ọgụ maka ikike dịrị onye(civil society groups) dịka otu SERAP katọrọ Gọọmenti Buhari maka iweghachi aka elekere azụ site na ịjụ itinye aka n'akwụkwọ ahụ.
Nkenke aha onyonyo Ndị isiala mba Afrika nwere ọgbakọ maka nkwekọrịta azụmahịa n' ọnwa maach
Mana, ụfọdụ otu, dịka otu jikọrọ ndị ọrụ nke a kpọrọ, 'Nigeria Labour Congress' (NLC) toro ya ma kwuo na ị ga n'ihu na nkwekọrịta a ga-ebute ịchụ n'ọrụ maọbụ mbawanye enweghị ọrụ.
Na mkparịtaụka onye ntaakụkọ BBC na ọkamụta n'ihe gbasara akụnaụba nke a kpọrọ economist na bekee na mahadum, 'Lagos Business School' bụ Bongo Adi nwere, o kwuru na ọ bụ ihe dị mma na onyeisiala kpebiri itinye aka na nkwekọrịta ahụ.
Mana dịka okwu a na-aga, lee ọsịsa ajụjụ ise dị mkpa na nkwekọrịta azụahịa n'Afrịka dịka Bongo Adi siri kọwa ya:
1. Gịnị bụ "African Continental Free Trade Agreement"?
Nke a bụ nkwekọrịta nke obodo dị n'Afrịka izụrịta ahịa na enweghị mgbochi ọbụla .
Bongo Adi kwuru na 'Free Trade Agreement' "bụ azụmahịa na-agara onwe ya na e nweghị mgbochi ọbụla."
Ọmụmatụ; North American Free Trade Agreement, European Union, ASEAN(Trade agreement by Association of Southeast Asian Countries) wdg.
2. Kedụ mba ndị binyereka akwụkwọ na nkwekọrịta AfCFTA?
Mba 44 n'ime Mba 55 nọ n'Afrịka binyerela aka na nkwekọrịta ahụ.
Obodo ndị etinyebeghị aha n'akwụkwọ nkwekọrịta ahụ gụnyere Nigeria, Benin, Botswana, Eritrea, Guinea-Bissau na Zambia.
3. Kedụ uru dị na AfCFTA?
1. Ọ ga-akwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị Naijirịa-
Nkenke aha onyonyo Ihe anyị nwekarịrị bụ akụ si n' ala
Dịka Ọkammụta Bongo Adi siri kọwa, ọ bụghị mba niile nwere ike imepụta ihe ndị dị ha mkpa.
"Anyị adịghị emepụta ụgbọala, na ngwa ahịa e ji arụ ọrụ (capital goods), ihe anyị nwere bụ akụ dị n'ime ala, ọ bụru na-enweghị azụmahịa, ihe ndị a agaghị abata."
2. Ọ ga-akwalite ụlọ mmepụta ngwaahịa ka ha nwe ike na-arụpụta ihe ha ga na-ezipụ mba ndị ọzọ
3. Adi kwukwara na ọ ga-eme ka a na-emepụta ngwahịa n'ọnụ ala
4. O kwukwara na ọ ga-eme ka Naijiria na-amụta nka imepụta ihe site n'aka mba Afrịka ndị ọzọ
4. O nwere ọghọm dị na atụmatụ a?
Ọ bụrụ na e mepe ụzọ, ngwaahịa ndị mba ọzọ ga-ejuputa n'ala Naijiria mee ka ụlọ mmepụta ngwahịa Naijirii sọwa ganịganị.
5. Kedụ ụzọ e nwere ike isi gbalahụ ọghọm dị na nkwekọrịta a?
O kwesighi ka emepe ụzọ fororo ka ihe ọbụla na-abata ala anyị.
Bongo Adi dụrụ ọdụ sị, "A ga na-ahọ ihe ndị a ga na-ekwe ka ọ bata. ihe ndị a na-eri eri dịka nfa-eze ( toothpick) na ihe ndị ọzọ abụghị ihe e kwesiri ka ọ na-abata."
Ụlọikpe atụọla ndị Boko Haram 113 mkpọrọ
Ncheta mbido Agha Biafra
Gịnị ka ị kwesiri ima tupu ị nabata onye odibo
Ịji ego achụ ego
Nzụkọ mba Afirika
Imerienwe, Obinkita, Ajatakiri na obodo ndị ọzọ aha ha adịghị mfe ịghọta
Ọ bụ anyị nwụchiri Duncan Mighty - Ndị Uweojii
Atụọla aka chiburu Sudan Omar al-Bashir mkpọrọ afọ abụọ maka nrụrụaka